Wholesale Frosted matte girazi isina kenduru zvirongo zvirongo fekitari uye vagadziri | Winby
Iyi matte kenduru mukombe inozivikanwa kwazvo nevatengi pasi rese. Tine mavara mazhinji evatengi kusarudza kubva. Midziyo yose yemakenduru yakaiswa muvharo wehuni kana wemishenjere. Tinogona zvakare kupa zvakagadziriswa masevhisi kune vatengi vedu, sekudhinda iyo kambani kambani pane mukombe kana kugadzira zvitambi uye kugadzira ruvara bhokisi.
Chinhu: A02M, A03M, A07M
Kukura: D6.2CM * H8.1CM, D7.2CM * H9.1CM, D8.2CM * H9.8CM
Color: tinogona kuita customized ruvara.
Frosted matte girazi isina kenduru inobata
1. Iyo kenduru chirongo inogona kuitwa neakasiyana saizi uye ruvara, tinogamuchira zvinodiwa nevatengi.
2. Iyi kenduru chirongo inogadzirwa negirazi rine chando uye chivharo chemishenjere, iko kumeso kwemavara kwakanaka kwazvo.
Makenduru emidziyo anogona kushandiswa nevheti kana tii mwenje makenduru.
YAKAKWANA imba yekushongedza tafura yekudyira, yepfungwa, yematafura matafura, maresitorendi uye mahotera.
Saizi D6.2CM * H8.1CM D7.2CM * H9.1CMM: D8.2CM * H9.8CM
Kurema 175g 225g 345g
Muvharo Chivharo chehuni kana chivharo chemushenjere
Pashure: Kenduru Wick Centering Chishandiso chekugadzira makenduru
Zvadaro: Yakakwenenzverwa girazi chirongo chinonhuhwirira kenduru ne bamboo muvharo